Dhaqaale yahan Mareykan ah: Obama Qaata oo Erdogan Na Siiya – Goobjoog News
Dhaqaale yaahanka caanka ah ee reer Mareykan Arthur Laffer ayaa aad u amaanay siyaasadda dhaqaale ee dalka Turkiga isagoo madaxweyne Erdogan ku ammaaney inuu ku guuleystay siyaasadda dhaqaale ee dalkiisa.
Khabiirkan oo hadal jeedin ka sameeyay Khamiistii caasimadda Turkiga ee Ankara, kana qeybgalayay dood cilmiyeed ku saabsan guulaha dowladda Turkiga ee siyaasadda dhaqaalah guud ayaa waxa uu yiri; ” Haddii aad dooneysaan inaad aragtaan dhaqaale xun waxaan idinku baaqayaa inaad Mareykanka booqataan, waxaanan wataa gorgortan ah inaan Erdogan na sii saan (Madaxweynaha Turkiga), oo aad qaadataan Obama.”
Laffer ayaa waxa uu farta ku fiiqay in barwaaqada dhaqaale ay ku xiran tahay 5 tiir oo asaasi ah, heerka canshuurta dowaldda oo hooseysa, gaar ahaan canshuurta tooska ah, kharashaadka dowaladda oo la xakameeyo, kaydka Bankiyada oo xoogan, iyo ganacsiga xorta ah.
Waxa uu tilmamay khabiirkani in si khaldan dunada looga arko dhaqaalaha Turkiga, laakiin xaaladdu ay sidaa ka duwan tahay; ” Waxaan aamin sanahay in dhaqaalaha Turkigu uu meel fiican marayo, ee haddii aad dooneysaan inaad aragtaan si dhab ah dhaqaale xun, waxaad booqataan Mareykanka, waxaanse wataa gorgortan ah inaad na siisaan Erdogan oo aad Obama nooga bedelataan”, waana sida uu hadalka u dhigay khabiirkan dhaqaale yahanka ah oo aad u amaamey madaxweynaha Turkiga sida wanaagsan ee uu u kobciyay dhaqaalaha waddankiisa.
Khabiirkani waxa uu aad u amaanay siyaasadda dhex dhuuqsiga dhaqaale ee dowaldda Turkigu ku dhaqanto, waxa uu caddeeyay in haddii sidan ay ku sii socoto uu si weyn u kobci doono dhaqaalaha dowaladda Turkiga, barqaada dalkaasina ay sii kordhi doonto.
Mar uu ka hadlayay raadka dhaqaalaha uu ku yeelan karo afgambigii dhicisoobay ee ka dhacay dalka Turkiga ayuu khabiirkani tilmamay in isku daygaasi uu sii xoojiyay un in dadka maalgashadayaasha ah ay ku kalsoonaadaan dalka Turkiga, isagoo tilmamay in arrintaasi saameyn Togan ku yeelandoonto dhaqaalaha Turkiga.
Waxaa xusid mudan, in Arthur Laffer uu ku dhashay gobolka Ohio ee dalka Mareykanka sanadkii 1940-kii, waxa uu xubin ka ahaa guddiga arrimaha siyaasadda dhaqaalaha Mareykanka ee madaxweyne Ronald Reagan, waxa kale oo uu la -taliyaha dhanka siyaasadda dhaqaalaha u noqday ra’isul wasaare Margaret Thatcher ra’isul wasaarihii hore ee geeriyootay ee dalka Ingiriiska.
Dhageyso: Gaas Oo Shaaciyey Musharraxnimadiisa
Rad lagu eedeeyay dilka haweeney oo lagu qabtay degmada Dayniile (Dhageyso)
Faah Faahin: Dagaal Ka Dhacay Degmada Jowhar Ee Sh/dhexe
Svcivk oypjtn Viagra alternative buy cialis canada
Aaqdic gnoexw Sale viagra cialis 20
Hkknpy mwqmmy 50mg viagra cialis cost
Vfqunh iklkkd Discount viagra canada online pharmacy
cialis online uk Claritin buy cialis canada [url=https://xz-...
non prescription cialis canadian mail order pharmacies cheap...
cialis patent expired canadian pharmacy certified canada pha...
purchase generic viagra viagra for sale fast working viagra...
best deals on cialis super active plus online buy prescripti...